सनराइज बैङ्क लि . | गृहपृष्ठ
Home लगानी सनराइज बैङ्क लि .
सनराइज बैङ्क लि .
मुख्य कार्यालय : गैरीधारा,काठमाडौं
स्थापना : २०६४ असोस २५
अध्यक्ष : मोतीलाल दुगड
सीईओ : सुरेन्द्रमान प्रधान
शाखा कार्यालय : ४८
देशका ठूला उद्योगी, व्यवसायी तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध विज्ञहरूको सामूहिक प्रयासमा यो बैङ्कको स्थापना भएको हो । २०६४ असोज २५ गतेदेखि आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको यो बैङ्कले छोटो समयमा नै देशका विभिन्न स्थानमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सफल भएको छ । कारोबार सञ्चालन गरेको करीब १ वर्ष७ महीनापछि अर्थात् २०६६ वैशाख २० गते बैङ्कले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३७ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरेको थियो । गतवर्षबैङ्कले आफ्नो चुक्ता पूँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार वृद्धि गर्न १० बराबर २ दशमलव ४ (१०:२.४) को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो । उक्त हकप्रद शेयर जारी गर्दा विक्री नभएको शेयरहरू पुन: बोलपत्रद्वारा विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई हाल बाँडफाँटसमेत भइसकेको छ । अब यो बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब १ करोड ५० लाख पुगेको छ ।
यो बैङ्कको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा हाल यस बैङ्कको शेयर न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । गत अप्रिल महीनाको मध्यतिर ओभरसोल्ड जोनको तल्लो तहमा टेवा पाएर न्यूट्रल जोनमा देखिएको यो बैङ्कको आसएसआई रेखा हाल स्केल ४८ तिर उन्मुख देखिएको छ । अप्रिल महीनादेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो बैङ्कको शेयर मूल्यमा सामान्य उतारचढावको अवस्थामा देखिएको छ । साथै, सो मूल्यका आधारमा बनेको आरएसआई रेखाको चालअनुसार आगामी दिनमा यो बैङ्कको शेयर मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले यस बैङ्कको शेयर विक्री गर्नेहरूका लागि केही समय पर्खनु उचित हुनेछ भने खरीदकर्ताहरूले आफ्नो लगानी योजनाअनुसार निर्णयगर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
आव ०६७/६८ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणसम्ममा यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ८५ करोड देखिए पनि बैङ्कले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा विक्री नभएको शेयर बोलपत्रद्वारा विक्री गरी चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब १ करोड ५० लाख पुर्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष०६७/६८ को अपरिष्कृत तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्कले रू. ७ करोड ७४ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा ४३ दशमलव ५२ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आवको तुलनामा बैङ्कको चुक्ता पूँजी वृद्धि भए पनि मुनाफामा कमी आएकाले यसको प्रतिशेयर आय, मूल्य-आम्दानी अनुपात र लगानीकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । बैङ्कको जगेडा कोष भने अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा १७ दशमलव ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू. २२ करोड ८७ लाख पुगेको छ । तर, निक्षेप सङ्कलन सो अवधिमा शून्य दशमलव ६७ प्रतिशतले कम भएर रू. १४ अर्ब १८ करोडमा सीमित भएको देखिन्छ । सो अवधिमा बैङ्कको लगानीतर्फ४४ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल रू. २ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । साथै, ऋण प्रवाहमा पनि शून्य दशमलव २३ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल रू. १२ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।
• यस बैङ्कको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नियमित रूपमा कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि केही समस्या पर्दैन । यसले गर्दा आफूलाई चाहिएको कुनै पनि समयमा उक्त शेयरमा लगानी गर्न र बजारबाट बाहिरिन कुनै समस्या नपर्ने देखिन्छ । यस कम्पनीको शेयर मूल्यमा आइरहने उतारचढावको अवस्थाले गर्दा सट्टेवाजहरूले पनि यो शेयरमा लगानी गरी सामान्य मात्रामा मुनाफा कमाउन सक्ने सम्भावना छ ।
• गत आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणसम्ममा यो कम्पनीको मुनाफामा कमी आएकाले बैङ्कको प्रतिशेयर आय र मूल्य-आम्दानी अनुपातमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । मूल्य-आम्दानी अनुपातामा वृद्धि भएको छ भने प्रतिशेयर आयमा सुधार हुन सकेको छैन ।
• बैङ्कले अघिल्लो वर्ष लगानीकर्ताहरू लाई ७ दशमलव ६९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । गत आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार भन्दा बैङ्कको खुद मुनाफा लगभग ४३ प्रतिशत कम रहेकाले यो वर्ष लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफलदरमा वृद्धि हुने सम्भावना छैन । यदि गत आवको चौथो त्रैमासिकमा बैङ्कको मुनाफादरमा उल्लेख्य वृद्धि भएमा भने लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल दरमा सामान्य वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।